हिरा*सतमा रहेका रवि बारे के भन्छन् यी प्रहरी प्रवक्ता कोइराला ? - Sidha News
हिरा*सतमा रहेका रवि बारे के भन्छन् यी प्रहरी प्रवक्ता कोइराला ?
काठमाडौं । प्रहरी प्रवक्ता एकनारायण कोइरालाले प्रहरी हि रासतभित्र कोही पनि असुरक्षित नहुने बताएका छन् । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी तथा प्रहरी प्रवक्ता कोइरालाले रवि लामिछाने अहिले पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको उनले बताए । अरु जसरी हि रासतमा बस्छन् रवि पनि त्यसरी नै बसेको उनको भनाई छ । कोइरालाले प्रहरी हिरा सतमा बसेको मानिसले सन्देश जारी गर्न नसक्ने बताए । रवि लामिछानेले आफ्नो श्रीमतीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर प्रहरीसंग नै आफु असुरक्षित रहेको भन्ने सूचना जारी गरेको बारे आफुले जानकारी पाएको बताए ।
अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दाका विषयमा यसरी सन्देश जारी गर्दा विषयान्तर गर्न खोजेको भन्ने बुझिन्छ । उनले हि रासतमा कहिले २ सय सम्म पनि अभियुक्त हुने भएकाले रविको मात्र होइन सबै अभियुक्तहरुको सुरक्षाको जिम्मा आफुहरुको हुने भएकाले रवि असुरक्षित हुन नपर्ने बताए । पर्सी आइतवार रवी लामिछानेलाई हिरा सतमा राख्नका लागि अदालतले दोस्रो पटक दिएको म्याद सकिदैछ । आइतवार रवि समर्थकहरुले र्याली निकाल्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुले रवि लामिछाने आइतवार रिहा हुने र फूलमाला लगाएर लैजाने भन्दै अभिब्यक्ति पनि दिइसकेका छन् । रवि लामिछानेका दाईले यस्तो अभिब्यक्ति दिएका हुन् । प्रहरी प्रवक्ता कोइरालाले शान्तिपूर्ण रुपमा निस्कने र्याली जुलुसलाई नरोक्ने बताउँदै सम्बेदनशिल क्षेत्रहरुमा भने जुलुस धर्ना दिने कामलाई शान्तिपूर्ण मान्न नसकिने बताए ।
चितवनमा यस अघि नै सभा जुलस गर्न नदिने भनेर घोषणा गरिएको स्थानमा र्याली जुलुस भने गर्न नदिने बताए । शान्तीपूर्ण रहेको अवस्थालाई भद्रगोल बनाउने काम भयो भने प्रहरीले त्यसै छोड्दैन । उनले रवि लामिछानेको २२ जना समर्थकलाई प क्राउ गरेको जानकारी दिए । त्यस मध्ये ४ जना धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेको र बाँकी १८ जनाको विषयमा पनि आइतवार सम्म निर्णय हुने बताए । उनले रवि लामिछाने कहिले रिहा हुन्छन् भन्ने कुरा भने बताउन नमिल्ने बताए । अनुसन्धानको क्रममा भएको विषयमा अहिले नै खुलाउन नमिल्ने भन्दै उनले अनुसन्धान नसकिएको हकमा रवि रिहा हुन नसक्ने बताए । रिहा हुने वा नहुने भन्ने कुरा अनुसन्धानमा भर पर्ने उनको भनाई छ । उनले चितवनका सबै होटलहरुमा सीसीटीभी राख्न निर्देशन दिएको बताए ।